Whatsapp Webhu haina kutakudza mubhurawuza rangu. Mhinduro | IPhone nhau
WhatsApp Webhu haina kutakura mubrowser yangu. Solution
Pablo Aparicio | | Zvidzidzo uye zvinyorwa, dzakawanda
Kanganiso iyo Chrome yaigona kuratidza
Sezvo imi mese muchiziva, WhatsApp Web yakawanikwa ye iPhone kungopfuura maawa makumi maviri nemana apfuura. Kuti tishandise iyi sarudzo tinoda kubatanidza iyo WhatsApp ye iPhone yedu nebrowser, iyo inofanirwa kunge iri pakero web.whatsapp.com. Pane imwe nguva imomo, tinoenda kuWhatsApp marongero eiyo iPhone, tinosarudza WhatsApp Web uye, otomatiki, ichatanga kuongorora kodhi Kana tangotariswa, tinogona kusiya iyo iPhone tobva tatanga kutaura kubva pakombuta yedu. Asi zvinokwanisika kuti iyo bhurawuza haigone kuwana sevhisi iyi, kunze kwekunge taisa yekuwedzera kwayo.
Kuwedzeredzwa kunogadzirisa dambudziko iri kunodaidzwa User-Agent Switcher uye zvazvinoita titendere kutsausa mawebhusaiti nekumhan'ara kuti tiri kushandisa bhurawuza ratisiri kunyatsoshandisa. Kamwe yaiswa, zvirinani mune iyo Google Chrome (ndiko kunove kwakaratidzirwa kushanda), tinogona ikozvino zvisina musono kubatanidza iPhone yedu nebrowser uye kushandisa WhatsApp Webb, kuti tikwanise kubvisa iyo Chrome yekuwedzera. Chero zvazvingaitika, ini handikurudzire kuti iwe ubvise iyo yekuwedzera kuitira kana uine matambudziko newebsite uye unofanirwa kuishandisa zvakare kudzosera bhurawuza kune yayo yekutanga mamiriro.
Kunyangwe isu takangozvisimbisa izvo inoshanda mugoogle chrome (muSafari hazvidiwe), uku kuwedzerwa kuri zvakare inowanikwa yeFirefox neOpera. Kana iwe ukashandisa imwe browser, unogona kugara uchitsvaga zita rekuwedzera kuti uone kana uchigona kurishandisa mubrowser yako, asi zvinoita kunge zvisingaite kuti usashandise chero chevatatu vataurwa uye kuti bhurawuza rako harishande neWhatsApp Webhu.
Isu tinotora mukana uno kurangarira kuti vashandisi veMac, pamusoro pekuti inoshanda neSafari, isu zvakare tine chishandiso chidiki chinowanikwa chinonzi ChitChat, kana tichida kumaka browser. Kana, kunyangwe zvese, iwe usiri kuda kushandura bhurawuza rako kana kushandisa ChitChat, pazasi pane zvinongedzo zvekutora Mushandisi-Agent Switcher yeChannel, Firefox uye Opera:
Dhawunirodha Mushandisi-Agent Switcher yeGoogle Chrome
Dhawunirodha Mushandisi-Agent Switcher yeFirefox
Dhawunirodha Mushandisi-Agent Switcher yeOpera
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » WhatsApp Webhu haina kutakura mubrowser yangu. Solution
Juan Pablo Morandé akadaro
uye kuishandisa pane ipad mini, hazvishande kwandiri.
Pindura Juan Pablo Morandé
Handimbofi ndakashandisa whatsapp webhu ... Kana iyo App isiri yakachengeteka kwazvo pane yangu iPhone, fungidzira mune chero browser pane PC !!! Kushungurudzika kwakanaka, ini handitombodi kufunga nezvazvo ... Zvakatemwa zvachose sarudzo, kunze kwekuti ini handione chero chinonakidza kunze kwekunge iwe uchishanda zuva rese pamberi pePC uye iwe usingade kutambisa bhatiri rako. .. Haisi nyaya yangu, ndine 6 Plus uye bhatiri Zvakaoma izvo zvakanaka, ndinoichaja husiku hwese seizvi uye handina kumbobvira ndapera bhatiri kubva munaGunyana wegore rapfuura kuti ndinaro !!! Ndataura sarudzo isina basa uye isina kuchengeteka.
Zvakanaka, ndinoshanda zuva rese pa desktop uye pane pc.
Ini ndinoshandisa iyo jekeru tweak uye zviri nyore kwandiri kutaipa mumakumbo pane muchitokisi. kunyangwe ndisina kuve nedambudziko iro ravanotaura
Isa iyo yekuwedzera uye haishande kana, chero mamwe mazano?
Pindura kuna Jose
inoshanda muopera pasina kuita chero chinhu chekuwedzera
Pindura kune juankrls
Pane iyo iPad ine Safari inoshanda kana iwe ukaichinjisa kune iro desktop desktop uye inoshanda chaizvo!
Ini handirongedze ese WatsApp Web Emoticons muChannel Shanduro 56.0.2924.87 (64-bit), Ubuntu 16.04.1 LTS inoshanda sisitimu.
Radio FM Spain yakagadziridzwa uye inosanganisira rutsigiro rweApple Watch
Matambudziko neApple Watch Sport Space Grey, isinganyanye kusagadzikana pane mamwe?